Western Union, Ria and Krung Thai services - uab bank
ငွေလွှဲခြင်း / International Money Transfer Services
မေလ ၂၃ရက်နေ့မှ မေလ ၂၇ ရက်နေ့ အပတ်အတွင်း Western Union နှင့် RIA တို့ဖြင့် နိုင်ငံခြားမှလွှဲသော ငွေများကို uab bank ၏ ဖော်ပြပါ ဘဏ်ခွဲများတွင်ထုတ်ယူနိုင်ရန် စီစဥ်ပေးထား‌ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
ဘဏ်ခွဲများတွင် Western Union နှင့် RIA တို့ဖြင့် နိုင်ငံခြားငွေလွှဲများကို
ငွေလက်ခံမည့်သူကမည်သည့် ဝန်ဆောင်ခမှပေးရန်မလိုဘဲငွေထုတ်ယူ နိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါသည်။
ပေးပို့သူ၏ နာမည်နှင့် နိုင်ငံ
WU, MTCN အတွက်ဆို လျှို့ဝှက် ဂဏန်း ၁၀ လုံး
Ria အတွက်ဆို လျှို့ဝှက် ဂဏန်း ၁၁ လုံး
Krung Thai Bank အတွက်ဆို လျှို့ဝှက် ဂဏန်း၊ Reference Number ၁၅ လုံး (၁၂ လုံးသည် နံပါတ်ဖြစ်ပြီး ကျန် ၃ လုံးသည် အက္ခရာ)
သိလိုသည်များကို uab bank ၏ Contact Center Facebook Messenger or
0 99 4000 5000 ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
1 နေပြည်တော် အမှတ်(၃)၊ ကျိုင်းတုံလမ်းနှင့် မော်လမြိုင်ကျွန်းလမ်းထောင့်၊ ဘဏ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဇုန်၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။ ဥတ္တရသီရိ နေပြည်တော် 067-417301~10
2 လသာ အမှတ်(၁၂၆)၊ မြေညီထပ်၊ လသာလမ်း၊လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ လသာ ရန်ကုန် 01-373718 ~ 30
3 ဆိုင်းတန်း ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၁၅/၁၈၇)၊ ၂၆လမ်း(ခ)၊၈၇လမ်းနှင့် ၈၈လမ်းကြား၊ဘုရင့်နောင်လမ်း၊အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ အောင်မြေသာဇံ မန္တလေး 02-4024810 ~ 24
4 ကျွဲဆည်ကန် ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(စ/၇၉)၊ ကျွဲဆည်ကန် (၆) လမ်း၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ ပြည်ကြီးတံခွန် မန္တလေး 02-4059945 ~ 56
5 တာမွေ ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၁၇၀/က)၊ မြေညီထပ်နှင့်ပထမထပ်၊ ဗညားဒလလမ်း၊ သာယာကုန်းရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ တာမွေ ဘဏ်ခွဲ ရန်ကုန် 01-4708000
Ext - 0051~0056
6 တောင်ကြီး ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၁၃၅)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ မြို့မရပ်၊ တောင်ကြီးမြို့။ တောင်ကြီး ဘဏ်ခွဲ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း 081-201912 ~ 18, 2124618~19
7 မူဆယ် ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(စျ - ၉၀)၊ စျေးရပ်ကွက်၊ မူဆယ်မြို့။ မူဆယ် ဘဏ်ခွဲ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း 082-52927, 52976
8 ဘုရင့်နောင် ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(ည/၅၃)၊ ယုဇနလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံဝင်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ မရမ်းကုန်း ရန်ကုန် 01-682901 ~ 02, 682975, 682626, 682917,682932, 9688862 ~ 68
9 ဒိုင်းမွန်းပလာဇာ ဘဏ်ခွဲ အမှတ် (ဂျီ-၀၉၇ မှ ဂျီ-၁၀၉ ထိ) ၊ မြေညီထပ်၊ ၇၈ လမ်း (၃၃ လမ်းနှင့် ၃၄ လမ်းကြား)၊ ချမ်းအေးသာဇံ၊ မန္တလေးမြို့။ ချမ်းအေးသာဇံ မန္တလေး 02-4024825 ~ 37
10 သင်္ဃန်းကျွန်း အမှတ်(ဓ/၇၃၄)၊ လေးထောင့်ကန်လမ်း၊ ဇ/တောင်ရပ်ကွက်၊သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ သင်္ဃန်းကျွန်း ရန်ကုန် 01-8550660~64
11 ပုသိမ် ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၆၄)၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ ရပ်ကွက်(၃)၊ ပုသိမ်မြို့။ ပုသိမ် ဘဏ်ခွဲ ဧရာဝတီ 042-23824~30, 22520
12 ပခုက္ကူ ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၁၃၇)၊ မြို့မလမ်း၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့။ ပခုက္ကူ ဘဏ်ခွဲ မကွေး ဘဏ်ခွဲ 062-239761 ~ 65
13 ပြည် ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၁၁၉၅၊၁၁၉၆) ၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ဆံတော်ရပ်ကွက်၊ပြည်မြို့။ ပြည် ဘဏ်ခွဲ ပဲခူး 053-24008,27966,25843
14 မုံရွာ အမှတ်(၅၂/ဋ)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မုံရွာတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့၊စစ်ကိုင်းတိုင်း။ မုံရွာ စစ်ကိုင်းတိုင်း 071-2028346 ~ 49
15 မိတ္ထီလာဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၉/င)၊ ပထမလမ်းမတော်လမ်းနှင့်ဂျီအီးစီလမ်းထောင့်၊ ပန်းထိမ်တန်း ရပ်ကွက်၊ မြို့မ(၄)ရပ်ကွက်ကြီး ၊ မိတ္ထီလာမြို့။ မိတ္ထီလာဘဏ်ခွဲ မန္တလေး 064-26445~48
16 စမ်းချောင်း ဘဏ်ခွဲ ပဒုမ္မာအားကစားတိုက်တန်း၊ ဗားကရားလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ စမ်းချောင်း ဘဏ်ခွဲ ရန်ကုန် 01-4708000
Ext - 0161~ 0166
17 မန္တလေး(၈၄)လမ်းဘဏ်ခွဲ အကွက်အမှတ်(၄၉)၊ ၃၇လမ်း နှင့် ၈၄လမ်းကြား၊ ရတနာဘုမ္ပိအနောက်ရပ်ကွက်၊မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ မဟာအောင်မြေ မန္တလေး 02-4076601 ~ 07
18 မန္တလေး(၁၉)လမ်းဘဏ်ခွဲ အကွက်အမှတ်(၁၂၅)၊ ၁၉လမ်း(၈၆x၈၇)လမ်း ကြား၊ အောင်မြေသာဇံရပ်ကွက်၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ အောင်မြေသာဇံ မန္တလေး 02-4030845~47, 4024839~38
19 မန္တလေး(၁၂)လမ်းဘဏ်ခွဲ အကွက်အမှတ်(၅၃၃)၊ ၁၂လမ်း(၇၉x၈ဝ)လမ်း ကြား၊ အမရဌာနီအနောက် ရပ်ကွက်၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ အောင်မြေသာဇံ မန္တလေး 02-4075672~76
20 Pabedan (Shwe Bon Thar Road) အမှတ်(၃၇၂)၊ အခန်း(၁)၊ မြေညီထပ်၊ ရွှေဘုံသာလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ပန်းဘဲတန်း ရန်ကုန် 01-248281, 371076, 371079
21 ကြည့်မြင်တိုင် ဘဏ်ခွဲ အမှတ် ( ၄၉၄/က )၊ ကြည့်မြင်တိုင်ကမ်းနားလမ်း ၊ သီတာရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ကြည့်မြင်တိုင် ဘဏ်ခွဲ ရန်ကုန် 01-2301668~ 74, 2301671~73
22 တာမွေ (မြင်းပြိုင်ကွင်း) ဘဏ်ခွဲ အမှတ် (၄ဝ)၊ အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊ တာမွေကြီး (ခ)ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ တာမွေ ဘဏ်ခွဲ ရန်ကုန် 01-8604348 ~ 51
23 မြောက်ဒဂုံ ဘဏ်ခွဲ အမှတ် (၂၉)၊ ပင်လုံလမ်းမကြီး၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန့်ကုန်မြို့။ မြောက်ဒဂုံ ဘဏ်ခွဲ ရန်ကုန် 01-3511091 ~ 97
24 ဘုန်းကြီးလမ်းဘဏ်ခွဲ အမှတ် (၉၁)၊ ဘုန်းကြီးလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ လမ်းမတော် ရန်ကုန် 01-2301833~38
25 ရွှေဂုံတိုင် ဘဏ်ခွဲ အမှတ် ( ၂၂ /က )၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဗဟန်း ရန်ကုန် 01-4708000
Ext - 0251~ 0256
26 လှိုင် အမှတ် (၇၈)၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ လှိုင် ရန်ကုန် 01-2305153 ~ 59
27 Botahtaung (Thein Phyu) အမှတ် (၁၅၆)၊ သိမ်ဖြူလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဗိုလ်တထောင် ရန်ကုန် 01-299428,202849
28 Insein (Saw Bwar Gyi Kone) အမှတ် (၁၃၄-၁/၂)၊ စော်ဘွားကြီးကုန်းပွဲရုံနှင့် ကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ အင်းစိန် ရန်ကုန် 01-9640179, 9640309, 9640310
29 Monywa(Chindwin Yadanar Market) ချင်းတွင်းရတနာအဆင့်မြင့်စျေး(ပထပ်)၊ စျေးမြောက်ဘက်၊ မုံရွာမြို့။ မုံရွာ စစ်ကိုင်းတိုင်း 071-26212-14
30 ကျောက်ပန်းတောင်း ဘဏ်ခွဲ No.(F-285) , Kyauk Pa Daung - Yay Nan Chaung Road, San Pya Quarter, Kyaukpadaung Township, Mandalay Division. ကျောက်ပန်းတောင်း ဘဏ်ခွဲ မန္တလေး 061-52223 ~ 29
31 မကွေး ဘဏ်ခွဲ အမှတ် (၅၅၄/၅၆၁) ပြည်တော်သာလမ်း၊ မကွေးမြို့။ မကွေး ဘဏ်ခွဲ မကွေး ဘဏ်ခွဲ 063-2028607~13
32 မြင်းခြံ ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၁ဝ၃)၊ (၈)လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ မြင်းခြံမြို့။ မြင်းခြံ ဘဏ်ခွဲ မန္တလေး 066-2022829,2022751, 2022064, 2022698,2022584
33 လားရှိုး ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(ဆ/၁၄/၅)၊ သိန္ဒီလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ(၁၄)၊ လားရှိုးမြို့။ လားရှိုး ဘဏ်ခွဲ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း 082-2202645, 2202546, 2202970
34 ရန်ကင်း (ရွှေအုန်းပင်) ဘဏ်ခွဲ တိုက်အမှတ် (၄၁)၊ Yankin Palm Village အိမ်ရာ၊ ရန်ရှင်းလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ရန်ကင်း ရန်ကုန် 01-8605312~18
35 မြောက်ဥက္ကလာ (ဝေပုလ္လ) ဘဏ်ခွဲ တိုက်အမှတ် ( ၁ )၊ ဝေပုလ္လအိမ်ရာ၊ ခေမာသီလမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ မြောက်ဥက္ကလာပ ရန်ကုန် 01-9691743, 9692237,9691563
36 ပုဇွန်တောင် ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၅၄)၊ ရေကျော်လမ်းနှင့် ဦးရွှေဂွန်းလမ်းထောင့်၊ ပုဇွန်တောင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ပုဇွန်တောင် (ရေ‌ကျော်) ရန်ကုန် 01-297370, 203425, 293254
37 မန္တလေး (၃၅) လမ်းဘဏ်ခွဲ အမှတ် ( ၄၁၃-က/၅ )၊ အမှတ်(A-1) ၊ ၃၅လမ်း၊ ရဝလမ်း x ၇၁လမ်း ကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ မဟာအောင်မြေ မန္တလေး 02-4039684,2832029,2832399
38 မန္တလေး (မင်္ဂလာစျေး ) ဘဏ်ခွဲ Building (9), Mingalar Market, Corner of 73street & 31street, Yan Myo Lon Quarter, Chanayetharzan Township, Mandalay Division. ချမ်းအေးသာဇံ မန္တလေး 02-4067457~60
39 မန္တလေး (ပြည်ကြီးမင်္ဂလာ) ဘဏ်ခွဲ Building (10), Road No (H), Between 63rd Street & 65thStreet, Pyigyimingalar Cargo Express Complex, Amarapura Township, Mandalay Division. အမရပူရ မန္တလေး 02-5155127~31
40 ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းဘဏ်ခွဲ မြေကွက်အမှတ်(၁၄၉၀)၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက် (၂၄)၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း မကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ တောင်ဒဂုံ ဘဏ်ခွဲ ရန်ကုန် 01-8100747~ 49, 01-8100752~53
41 ရန်ကင်း (ကျောက်ကုန်း) ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၂ဝ)၊ အောင်ဇေယျလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ကျောက်ကုန်း၊ ရန်ကင်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ရန်ကင်း ရန်ကုန် 01-3560152~53,01-73301128~129,7330153
42 ပန်းပဲတန်းဘဏ်ခွဲ တိုက်အမှတ်(၆၂၈/၆၃၆)၊ ၂၉လမ်းx၃ဝလမ်းကြား၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ပန်းဘဲတန်း ရန်ကုန် 01-8372720,8372760,8372764
43 မန္တလေး (နန်းရှေ့ဘဏ်ခွဲ) အကွက်(၁၄)၊ ဦးပိုင်(၄)၊ ၆၂လမ်း၊ ၁၈x၁၉လမ်းကြား၊ ဒေါနဘွားရပ်ကွက်၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ အောင်မြေသာဇံ မန္တလေး 02-4061004, 61057, 61059
44 အမရပူရ အကွက် (၅၉၇)၊ အိုးတော်၊ သိမ်ကြီးရပ်၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ အမရပူရ မန္တလေး 02-4059301,59302, 59689
45 မြောက်ဥက္ကလာ (သီရိရတနာ) ဘဏ်ခွဲ အမှတ် (F-12,13)၊ အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း(သီရိရတနာ)ဝင်း၊ အမှတ်(၃)လမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ မြောက်ဥက္ကလာပ ရန်ကုန် 01-9690435, 9691561, 9692027,9691448
46 တောင်ငူ ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၁၆/၈၇)၊ ဗိုလ်မှူးဖိုးကွန်းလမ်း၊ တောင်ငူမြို့၊ ပဲခူးတိုင်း။ တောင်ငူ ဘဏ်ခွဲ ပဲခူး 054-25243, 25339, 25010
47 အောင်ဗန်း No.(43), Pyi Htuang Su Road, (4) Quarter, Aungban Township, South Shan State. အောင်ဗန်း ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း 081-61303~05
48 အလုံ(အောက်ကြည့်မြင်တိုင် လမ်း) ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၂၈၉)၊ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ အလုံ ရန်ကုန် 01-2302446~48
49 Mayangone (Thamine Station Road) အမှတ်(၃၅-က)၊ သမိုင်းဘူတာရုံလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ မရမ်းကုန်း ရန်ကုန် 01-9669238 ~40
50 မြန်မာ့ဂုဏ်ရည် ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၁၄၁)၊ မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ရန်ကုန် 01-8381102, 8381475, 8381430
51 သုဝဏ္ဏ(ကမာကြည်)ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၅)၊ ကမာကြည်လမ်းမကြီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ သင်္ဃန်းကျွန်း ရန်ကုန် 01-2331063 ၊ 2331076 ၊ 2331113
52 မြောက်ဒဂုံ (ရာဇဓိရာဇ်)ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(ထ/၁၃၈)၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ မြောက်ဒဂုံ ဘဏ်ခွဲ ရန်ကုန် 01-3511390~92
53 ကမာရွတ် (လှည်းတန်း) ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၈၉)၊ လှည်းတန်းလမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ရန်ကုန်မြို့။ ကမာရွတ် ရန်ကုန် 01-537021, 537117
54 တောင်ဥက္ကလာ (သံသုမာလမ်း) ဘဏ်ခွဲ အမှတ် ( ၉၆၉/ခ )၊ သံသုမာလမ်းမကြီး၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ တောင်ဥက္ကလာပ ရန်ကုန် 01-8500849, 8500851~54
55 ကမာရွတ် (ဆင်မလိုက်) ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(ဝဝ၃)၊ A-1၊ နှင်းဆီလမ်း၊ ဆင်မလိုက် Highway Complex ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ကမာရွတ် ရန်ကုန် 01-537992, 537846, 537782
56 ကျောက်တံတား (ဆူးလေ) ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၁၈၄/၁၈၆)၊ ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ကျောက်တံတား ရန်ကုန် 01-8381734, 8381665
57 Kyeemyindaing (Pann Pin Gyi Street) အမှတ်(၁၂)၊ ပန်းပင်ကြီးလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ကြည့်မြင်တိုင် ရန်ကုန် 01-9317889~93
58 Dagon (Nawaday Street) အမှတ်(၂၄/၂)၊ နဝဒေးလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဒဂုံ ရန်ကုန် 01-8370266 ~ 67, 8370218
59 လမ်းမတော် (၀ါးတန်းလမ်း) ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၄၇)၊ ဝါးတန်းလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ လမ်းမတော် ရန်ကုန် 01-2302462,2302465,2302466
60 ဗိုလ်တထောင် (ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်း ) ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၂၅၁၊ ၂၅၃)၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဗိုလ်တထောင် ရန်ကုန် 01-8398676,8290958,8293073,8202648
61 မန္တလေး (၈၃)လမ်းဘဏ်ခွဲ No.(268) , 83 street, between 28 and 29 street, Chan Aye Thar Zan Middle Quarter, Chanayetharzan Township, Mandalay Division. ချမ်းအေးသာဇံ မန္တလေး 02-4069245~49
62 ကျောက်ဆစ်တန်း အမှတ်(၆၁၃)၊ (၈၄)လမ်း၊ (၄၄)လမ်းနှင့် (၄၅)လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ မဟာအောင်မြေ မန္တလေး 02-4076701~05
63 ပြင်ဦးလွင် ဘဏ်ခွဲ No.(60/B), U Paing No.(24) D, (6) Street,Near Khae Lal Kyaung, (7)Quarter, , Pyin Oo Lwin Township, Mandalay Division. ပြင်ဦးလွင် ဘဏ်ခွဲ မန္တလေး 085-2028279, 2028326, 2023303~05
64 ရွှေဘို ဘဏ်ခွဲ အမှတ် (၆/၈)၊ အောင်ဇေယျလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ကွင်းအကွက်အမှတ် နှင့်အမည်(၁၇)၊ သခွတ္တောရပ်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၆၇-ခ)၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။ ရွှေဘို ဘဏ်ခွဲ စစ်ကိုင်းတိုင်း 01-4708000
Ext - 0791~ 0796
65 စက်မှုဇုန် ဦးပိုင်(၆၆)၊၆၂လမ်းနှင့်ရတနာလမ်းကြား၊စက်မှုဇုန်(၁)၊ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊မန္တလေးတိုင်း။ ပြည်ကြီးတံခွန် မန္တလေး 02-5154738~39,5154749,5154750,5154751
66 Thaketa (Ayer Wun Road) No.(72-B , 73-A), Ayer Wun Road, (7) East Quarter , Thaketa Township, Yangon. သာကေတ ရန်ကုန် 01-558783, 558778~79
67 Latha (Strand Road) အမှတ်(၄ဝ၈/၄၁၂)၊ ကမ်းနားလမ်းနှင့်(၁၉)လမ်းထောင့်၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ လသာ ရန်ကုန် 01-2303256~59
68 Mandalay (80Street-Chainatown) No.(594), (80) street (Between 28 street and 29 street), Chanayetharzan Township, Mandalay Division. ချမ်းအေးသာဇံ မန္တလေး 02 -4069283~87
69 မန္တလေး (မနော်ဟရီ) ဘဏ်ခွဲ ကွင်းအမှတ်(င-၅)၊ မနော်ဟရီလမ်း၊ ၆၄လမ်းနှင့် ၆၅လမ်းကြား၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ ချမ်းအေးသာစံ မန္တလေး 02-4080923, 4080925,4080931, 4080927, 4080947
70 မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်(ဗညားဒလ) ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၈၂/၈၄)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ရန်ကုန် 01-8619601~03
71 ပုဇွန်တောင်(မဟာဗန္ဓုလ(၅၄) လမ်း)ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၁၆၂/၁၆၄)၊ မဟာဗန္ဓုလမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်တောင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ပုဇွန်တောင် (ရေ‌ကျော်) ရန်ကုန် 01-202771 , 203471,294493,297435
72 ဗဟန်း (တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း) ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၄၄၁-ဘီ-၁)၊ တက္ကသိုလ်ရပ်သာလမ်းသစ်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဗဟန်း ရန်ကုန် 01-8605582 ~ 85
73 လသာ (ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း) ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၉၇)၊ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း၊ အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ လသာ ရန်ကုန် 01-242348,01-240134,240149, 210414, 242661
74 တောင်ဥက္ကလာ (နန္ဒ၀န်စျေး) ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၅၈၇/ခ)၊ သုမင်္ဂလာလမ်း၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ တောင်ဥက္ကလာပ ရန်ကုန် 01-8500881 ~ 86
75 တပ်ကုန်း ဘဏ်ခွဲ အမှတ် ၆၄၆၊ သူရိန်လမ်း၊ တပ်ကုန်းမြို့၊ နေပြည်တော် ။ တပ်ကုန်း နေပြည်တော် 067-8071155 ~ 59
76 ကျောက်တံတား (ပန်းဆိုးတန်း) ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(၁၈၆/၁၈၈)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ကျောက်တံတား ရန်ကုန် 01-8378178,8378431,8391481
77 အင်းစိန် (ပေါက်တောဝ) ဘဏ်ခွဲ No.(91/A), Coner of Bayinnaung Road & Myot Thit (2)Street, Myot Thit (Ka) Quarter, Insein Township, Yangon Division. အင်းစိန် ရန်ကုန် 01-3643037, 3643083, 3643150
78 ဗဟန်း (ဓမ္မစေတီလမ်း) ဘဏ်ခွဲ အမှတ်၄၅၆(B) ၊ ၃၀( C ), ၅၁၊ Golden Link Condo၊ ဓမ္မစေတီလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ဗဟန်း ရန်ကုန် 01-504571,504607,504297,504448
79 မြိတ် အမှတ်(၉၈)၊ ဆိပ်ငယ်ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မြိတ်မြို့၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး။ မြိတ် တနင်္သာရီတိုင်း 01-4708000
Ext - 0801~ 0806
80 မော်လမြိုင် (စထရန်းဟိုတယ်) ဘဏ်ခွဲ မော်လမြိုင် (စထရန်းဟိုတယ်), အောက်လမ်းမကြီးနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ ဖက်တန်းရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့။ မော်လမြိုင် ဘဏ်ခွဲ မွန်ပြည်နယ် 01-4708000
Ext - 0821~ 0826
81 Thanlyin Branch No(129), Bogyoke Nay Win street, Thanlyin Township, Yangon. Thanlyin ရန်ကုန် 01-4708000
Ext - 0831 ~ 0836